Madzibaba Bhenji vanopa mukadzi Key to Lock murume wake mukati mebeche remumwe mukadzi! - Masasi eHarare
DzeBonde Madzibaba Bhenji vanopa mukadzi Key to Lock murume wake mukati mebeche remumwe...
Yainge yava batai batai mumusha weWaterfalls muna Masocha pasangano re Johanne masowe yechishanu panotungamirwa naMadzibaba Bhenji vechidiki.
Eunice Madhambure ane makore 24 ekuberekwa akaenda pasowe iro riri muWaterfalls achida kubvunza kwaive nemurume wake Sydney Mare aive nemazuva asiri kurara pamba, Eunice ndopaataurirwa namadzibaba Bhenji kunzi murume wako ari mulodge muroom 12 mukadzi akakumbira kuvabata ndipo paakanotenga key, madzibaba ndokumuti kiya.
Murume wa Eunice ndokunamiririra nemusikana anonzi Lucia anova muvakidzani wavo, mukuru welodge ndiye azofona kutaura kuno vatakurwa kuendeswa kumasowe varume musahure zvakaoma zvinoitika munyika umu. Uye vakadzi siyanai nevarume vevanhu magwana ndiwe.
Honai mapictures acho pano
Madzibaba Bhenji - Waterfalls